Somaliland oo si caro leh uga Jawaabtay Go’aankii Madaxweyne Farmaajo ku Saxiixay in Dalka…… | Garoowe.net	 #ref-menu
Somaliland oo si caro leh uga Jawaabtay Go’aankii Madaxweyne Farmaajo ku Saxiixay in Dalka……
Oct 4, 2017 - 1 Aragtiyood
Waxaa Akhristay 1,226
Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta ee Maamulka Somaliland Mustafe Faarax Abraar ayaa sheegay in xeerka cusub ee Madaxweyne Farmaajo dhowaan uu saxiixay uusan quseyn dowladooda.
Wasiirka oo shir jaraa’id ku qabtay Hargeysa ayaa tilmaamay in xeerka uusan ka shaqeyn doonin deegaanadooda, uuna jiro shaircigooda u gaarka ah. “Xeerar caalami ah baa jiro oo lagu maamulo. Waxaa la ogyahay Soomaaliya (dowladda) gacanta wadanka kuma wada hayso, Marka anaga nagama xiri karaan, Maalin dhowna waxaan sameyndoonnaa wax noo gaar ah oo anagu leenahay.” Ayuu yiri
mohamud qudka says:
waxan u arkaa wasiir mustafe in uu ku hadlay hadal aan alle ka aqbalayn somaaliyana waa mid qura madaxweyneheeduna waa mid